Amancinci amancinci kunye namanqanaba amakhulu ekukhiqizeni abenzi be-Apicmo cdmo
Iinkonzo zethu > Ukuveliswa kwamancinci kunye nokukhutshwa kwamanzi amakhulu
Uninzi lwabaxhasi bethu luseNyakatho Melika, iYurophu, i-Aisa, kuquka iPfizer, i-lilly, i-roche, i-GSK, i-MSD, i-bayer kunye nezinye iinkampani ezidumileyo.
Zonke iinkonzo zethu zokwenziwa kunye neenkonzo zokuvelisa ziqhutywa phantsi kweemeko zobumfihlo obuyimfihlo. Amaqela ethu eeprojekthi ezidibeneyo axhaswa liqela elinamava kwaye lizinikezele ngamachiza. Ukusebenzisana nama-reactors ngeqondo lokushisa ukusuka kwi-100˚C ukuya kwi-300˚C, kunye nezikali ezivela kwi-5L ukuya kwi-5000L, ixabiso linikezelwa kubaxumi ngokubambisana okusebenzayo ngaphakathi kwendlu ye-intermediate yeeprojekthi eziphambili izithako zeyeza. Ukwenziwa kweeNkonzo kwenziwa kwiziko lethu lokukhiqiza ngokupheleleyo.
Senza ngokuqhelekileyo ukhenketho lokubonelela ngekhemistri yokuvelisa ukuhlangabezana neprojekthi ethile yokunikezelwa ngokukhawuleza kunye neendleko ngelixa udibanisa imigangatho ephezulu yenkqubo yokukhuseleko nokuthotyelwa komthetho. Iinkqubo zokuvelisa ezilungiselelwe zivumela ukuba ubukhulu beetch eguquguqukayo kunye nomgangatho womgangatho ophuculweyo. Zonke iinkqubo zenzelwe ukuhlangabezana nemigangatho yolawulo oluqinileyo.